ट्रम्प पत्रकारसँग आत्तिए, ह्वाइट हाउस छिर्ने प्रेसपास नै खोसियो ! – Everest Dainik
ट्रम्प पत्रकारसँग आत्तिए, ह्वाइट हाउस छिर्ने प्रेसपास नै खोसियो !
वासिङटन । अमेरिकामा मध्यावधी चुनाव भएको भोलिपल्टै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पत्रकार सम्मेलनको क्रममा एक पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भएको छ ।
सिएनएनका पत्रकार जीम अकोस्टा र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा कुरा बाझिएपछि बाझिएपछि ती पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस छिर्ने विशेष पास समेत खोसिएको छ । राती ८ बजेको बुलेटिनको तयारीका लागि पत्रकार अकोस्टाले ह्वाइट हाउसबाट बुलेटिन तयार पार्न खोज्दा त्यहाँका अधिकारीले समेत रोक लगाए ।
ह्वाइट हाउसबाटै यस्तो प्रतिवन्ध लगाइएपछि पत्रकार अकोस्टाले यसबारे ट्वीट समेत गरका थिए । तर ह्वाइट हाउसका आुसार दिउसोको पत्रकार सम्मेलनमा ती पत्रकारले राष्ट्रपति कार्यालयकी ‘इन्टर्न’ कर्मचारीले माइक खोस्न खोज्दा कम्मरमा हात पुर्याएको भनिइएको छ । जब कि, दिउसोको पत्रकार सम्मेलनको भिडियोमा पत्रकार अकोस्टाले एक हातले माइक समातेका छन् भने अर्को हात पनि खुल्लै देखिन्छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्प निराश र आक्रोशितः
खासमा दिउसो ह्वाइट हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनको क्रममा सिएनएनका पत्रकार जीम अकोस्टाले ट्रम्पलाई केही प्रश्न गरेका थिए । ट्रम्प उनका प्रश्नप्रति नै असन्तुष्ट र आक्रोशित बनिहाले । ट्रम्पले उनको प्रश्न पुग्यो भन्दै जवाफ दिनै चाहेका थिएनन् ।
यतिसम्म कि, ‘अकोस्टाप्रति सिएनएनले शर्म मान्नुपर्ने’ भन्दै व्यक्तिगत गालीमै उत्रिए । ट्रम्पले अकोस्टालाई भनेका थिए, तिमी रुखो र डरलाग्दो मान्छे हौ । तिमीले सिएनएनमा काम गर्नु हुँदैन !’
सोही क्रममा ट्रम्पले उनलाई थप बोल्न नदिएर माइक अर्को पत्रकारसम्म पुर्याउन सहयोगीलाई अह्राएका थिए । सहयोगी एक महिलाले अकोस्टासँग माइक खोसेकी थिइन् । यसै क्रममा ती युवतिलाई अकोस्टाले पेटमा देब्रे हात पुर्याएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट आलोचना भयो ।
यस घटनापछि ‘ग्लोबल मिडिया’का थुप्रै पत्रकारहरु अकोस्टाको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले ट्वीट गर्दै उनको पक्षमा रहेको भनी राष्ट्रपतिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघिका अधिकांश राष्ट्रपतिले पत्रकारलाई यस्तो व्यवहार नगरेको भन्दै ट्रम्पप्रति उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमै सामेल भएका अरु पत्रकारले समेत जीम अकोस्टाको गल्ती नभएको बताएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट
ट्याग्स: CNN Reporter, donald trump